Ultimate Guide to Monitoring Your Online rere | Martech Zone
Ultimate Guide to nlekota oru Gị Online rere
Sọnde, Febụwarị 8, 2015 Sunday, July 26, 2015 Douglas Karr
Ezi ndi mmadu no na Trackur etinyela ihe omuma a na otu esi nyochaa njirimara nke onwe gi ma obu aha gi na ntaneti. Nzọụkwụ ha ezipụta:
Chọpụta aha gị - nyochaa aha ika aha, ụlọ ọrụ aha, ngwaahịa aha na ọdịiche.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-ege gị ntị - onye nwere oke na aha gị n'ịntanetị?
Ghọta ebumnuche gị - kedu ka ị ga-esi tụlee ma aha gị ọ na-emeziwanye?
Ezipụta mkpa gị - gini bu ihe ichoro ichoro na isi mmalite ndi ichoro?
Kedu ka ị ga-esi nyochaa? - kedu usoro eji eme ka a mata ma zaghachi okwu?
Nye ga-enyocha mkparịta ụka ahụ? - onye ka ị na-enyefe ijikwa na ịza ajụjụ gbasara aha ịntanetị?
Tags: eduziinfographicaha onlinenlekota oru ntaneti onlinendu ndunlekota oruonye na -eso ụzọ
Ntuziaka Sociallọ Ọrụ Social Media
Social Media Pundits na-ebibi Corporate Social Media
Feb 8, 2013 na 9:27 PM
Feb 8, 2013 na 9:30 PM
Bet nzọ @andybeal: disqus! Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Feb 10, 2013 n’elekere 1:45 nke abali
Daalụ maka nnukwu ozi Doug, enwere m anya ka mma karịa mgbe ihe nwere foto na agba mara mma! 😉
Daalụ maka post,
Piano na -enweghị ịhụnanya
Feb 13, 2013 n’elekere 2:51 nke abali
Ndewo Douglas. Ọhụụ gị na-egosi otu aha maka azụmahịa dị n'ịntanetị dị mkpa. Ọ na-enye nchịkọta iji gosipụta akụkụ niile nke azụmaahịa ọ kachasị ndị na-etinye ego bụ ndị na-akpata ego azụmaahịa ahụ